Akanjo vaovao an'ny Samsung: Galaxy Watch Active and Fit | Androidsis
Samsung dia manolotra ny Galaxy Watch Active sy Galaxy Fit
Manuel Ramirez | | Fitaovana hafa, SmartWatch
Samsung dia nanolotra ny Galaxy Watch Active sy ny Galaxy Fit, fitafiana roa tonga lafatra ho an'ny andavan'andro. Ny iray natao ho an'ny smartwatch, raha ny Fit kosa no mety akanjo mety indrindra ho an'ireo izay maniry fehin-tànana marani-tsaina izay mirakitra ny hetsika ara-batana rehetra ataon'izy ireo.
Akanjo 2 azo zahana amin'ny rafitra famandrihana tsy misy tariby hita ao amin'ny Galaxy S10 vaovao ary hahafahantsika mampiasa azy io ho toy ny loharanon-kery hampiomanana azy ireo hampiasaina indray.
Samsung brasele milanja 23 grama fotsiny izy, ary toy ny Watch Active, ny Galaxy Fit dia tsy mahazaka rano. Ny faharoa dia hatramin'ny 5 metatra ny halaliny. Milanja kely lanja kely amin'ny fampifandraisana azy amin'ny sisa amin'ireo fitaovana natolotr'i Samsung androany, toy ireo Galaxy S10 ary ny Galaxy Buds.
Ireo fitaovana roa ireo dia afaka firaketana hatramin'ny 6 karazana hetsika ara-batana samihafa. Izy roa koa dia afaka manoratra ireo tsingerin'ny torimaso samihafa mba hananana tatitra tena izy momba ny fomba fatoriantsika isan'andro.
Ary na dia hitan'izy ireo aza fa miady saina izahay, manolotra vahaolana toy ny fotoana fialan-tsasatra manandrana miaina ary maka ny fombantsika ara-batana sy ara-pihetseham-po mahazatra.
ny fenitra feno momba ny Galaxy Watch Active Izy ireo dia:
Exynos 9110 chip.
28mm 360 × 360 AMOLED Eo amin'ny efijery mandrakariva.
Fahatsiarovana anatiny 4GB
Ny Galaxy Fit no lehibe indrindra amin'ireo maodely smartband 2:
Efijery 1 ″ 120 × 240 AMOLED
Fiampangana tsy misy tariby
24 grama ny lanjany
Amin'ny mainty sy fotsy
Ny Galaxy Fit E, kely kokoa amin'ny asany:
0,74 ″ 64 × 128 efijery PMOLED
Milanja 15 grama izy.
Amin'ny fotsy, mainty sy mavo
Tsara ny manasongadina ny asa tsara vitan'i Samsung amin'ny famolavolana ireo efijery ary ilay interface izay miara-miasa amin'izay nitranga tamin'ny One UI. Na amin'ny Galaxy Fit na amin'ny Galaxy Watch Active, ny interface dia hanome ilay naoty hanolotra traikefa an-tsary mahafinaritra ary amin'izany dia hanatsara ireo fotoana izay ahazoanay fampandrenesana na hanamarihana ny isan'ny dingana natao.
El Galaxy Watch Active dia ho hita manomboka ny 8 martsa amin'ny vidiny $ 200, raha afaka miditra amin'ny fividianana ny Galaxy Fit dia hiandry ny 31 Mey isika. Fitafiana roa manana kalitao tsy azo lavina ary manampy an'izay antsoin'i Samsung hoe "Ho avy Mifandray".
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Samsung dia manolotra ny Galaxy Watch Active sy Galaxy Fit
Toy izany ny fakan-tsarimihetsika an'ny Samsung Galaxy Buds
Galaxy Fold: ofisialy izao ny finday avo lenta an'ny Samsung